ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၁-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- တော်ဝင်အလုပ်သမားများ လွတ်မြောက်ရေး သတင်းစာရှင်းလင်း click
- မိတ္ထီလာအဓိကရုဏ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်ယူ click
- တရုတ်သံအမတ်ကြီး မဒေးကျွန်းကို လာရောက်လေ့လာ click
- ယူနန်အစိုးရ သုတေသနအဖွဲ့ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များနဲ့ ဆွေးနွေး click
- ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနဲ့ ၀န်းကျင်ထိခိုက်မှု click
- တအိမ်ထောင် ၂ယောက် နှုန်းပဲ ကလေးမွေးရမယ် click
- တောင်သူလယ်သမား အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေး အစည်းအဝေး ကျင်းပ click
- နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ဖို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာပြည် လာမည် click
- အမေရိကန်ရောက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ပြည်ပဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တချို့ ဆန္ဒပြ click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မစ္စတာ အိုဘားမားနဲ့ တွေ့မယ် click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အမေရိကန် ခရီးစဉ် (ရုပ်သံ) click
- ဦးသိန်းစိန် ဝါရှင်တန်မှာ မြန်မာတွေနဲ့ တွေ့ click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အမေးအဖြေ click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီးစဉ်အပေါ် မင်းကိုနုိုင် အမြင် (ရုပ်သံ) click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီးစဉ်အပေါ် ကိုကိုကြီး အမြင် (ရုပ်သံ) click
- အိမ်ဖြူတော်ရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲ (ရုပ်သံ) click
- ABSDF နဲ့ မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး click
- ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်များ ၀ါရှင်တန်ဒီစီကို ရောက်ရှိ၊ ပြည်ပရောက်မြန်မာများက ကြိုဆို၊ ပွဲစဉ်အချိန်စာရင်း ထွက်ရှိ click
- မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေး click
- အသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ မီဒီယာကဏ္ဍ (ရုပ်သံ) click
- ကရင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်တွေ (ရုပ်သံ) click
- ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ သွားရာလမ်း … တကြောင်းတည်းသော လမ်းတဲ့လား … (ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ) click
- “နိုင်ငံရေးမသေ၊ ပြည်သူမကြေ” စေဖို့ရာ … (ဆောင်းပါး) click
- မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၂၁) click
- အရက်အခြေပြု မုဒိမ်းမှုဝေဆာ ဘုန်းတော်ကြောင့်ပါ သမ္မတရေ (မုိုးမခပေးစာ) click
- တခါက ဆရာဒဂုန်တာရာ မွေးနေ့ပွဲ (ဆောင်းပါး) click
- ဒ ဂု န် တာရာေ နွ ဦး- ၂ ( က ဗျာ) click
- သမ္မတကြီး လိမ္မာတော့မယ် တဲ့လား (ကာတွန်း) click
- လျှော့ဈေးရလုို့ (ကာတွန်း) click
- အီရတ်ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှု လူအများအပြား သေဆုံး click
- ဆီးရီးယား စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် ကယ်ဆယ်ရေး လိုအပ်နေ click
- အိုကလာဟိုးမားမှာ လေဆင်နှာမောင်း ၀င်မွှေ click
- တရုတ်သမ္မတသစ်ကို အိုဘားမား နောက်လတွေ့မယ် click
- နယ်စပ်ပြဿနာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းရေး တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယ သဘောတူ click
- တရုတ်-အိန္ဒိယ ဆက်ဆံရေး ရှေ့အလားအလာ click
- မြောက်ကိုရီးယား တာတိုဒုံး ၂ စင်း ထပ်မံ ပစ်လွှတ် click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 9:28 AM
ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဟာ
ဒီမိုကရေစီ ယန္တယားကြီးလည်ပတ်ဖို့ မောင်းနှင်ပေး
ဒါကြောင့် ဆန္ဒနဲ့ ဘဝ ထပ်တူဖြစ်စေဖို့ သားသမီးများ
ကျောင်းမဖွင့်မှီ အပြောင်းအရွှေ့ တွေ ကို ဆောင်ရွက်ပေး
ရန်ကုန်တိုင်းက ဆရာ ဆရာမ အပြောင်းအရွှေ့ပါ
..... ပီတိ ကိုစားအားရှိပါ၏ ... ဆိုတဲ.အတိုင်း ကိုယ်.တပည်.တွေ SMART PHONE တွေ ၊ TABLET တွေ
နဲ. ကျောင်းလာတက်ချိန် မှာ ဆရာ၊ ဆရာမ တွေကတော.
ကြက်ဥ ကြော် ၊ ပဲပြုတ်ကြော် နဲ. ထမင်းဘူးထည်.လာပြီး
၂၀၀/ ကားမစီးနိုင် ၊ ၅၀/ ကားစောင်.စီး ကြရတာတွေ
PHONE ကိုင်နိုင်သူ အတော်နည်းပါတယ် ၊
... ရန်ကုန်တိုင်းက ဆရာ ဆရာမ အပြောင်းအရွှေ့.တင်မက
တပြည်လုံး အတိုင်း အတာ စီစစ် ပေးသင်.ပါတယ် ။
နောက်ပြီး ယနေ.ကျောင်းအချို. မှာဖြစ်နေတာ
... ရန်ကုန်တိုင်း ၊ လှိုင်မြို.နယ် ကအထက်တန်း ကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ
မှာ ကျောင်းသားတွေ စာသင်ချိန် မှာမူးယစ်ဆေးပြားတွေ သောက်ပြီး စာသင်ခုံအောက်ဝင်အိပ် တာတွေ လုပ်ကြပါတယ် ၊
အထက်ကိုတင်ပြဖို.ကြိုးစားတဲ. ဆရာ/ ဆရာမ တွေကို ကျောင်း
အုပ်ဆရာမကြီးက "ပင်စင်သွားရခါနီးလို.တိုင်တာ တောတာမလုပ်ဖို."တားမြစ်တယ်လို.သိရတယ် ၊
ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန .. သိအောင်ပါ ။
အခြားကျောင်းအချို.မှာလည်းဒါမျိုး လုပ်ရပ်တွေ ရှိနိုင်လို. လူငယ်ကျောင်း
သားလေး များ .. မပျက်စီးရေး ...တားဆီးနိုင်ရေး တင်ပြတာပါ ။
တီတီချိုရေ ပြောလဲ လေသာ ကုန်မယ် အလကားပဲ။
ရာထူးပေးတာကလဲ မမျှတ လက်သင့်ရာ စာတော်ခေါ်နေတာ။
ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ပညာရေးက အစမ်းသပ်ခံ ဖြစ်နေတာဆိုးတယ်။
အပြောင်းအရွှေ့ ကိုတော့ အမြန်လုပ်ပေးသင့်တယ်။
သန်လျှင် အထက ၁ က စာရေးမက SAT/JAT ဆရာမတွေ ကိုဝင်ပြီးသြဇာ
ပေးနေတယ်။ ဆရာ ဆရာမ လစာတွေထဲက ဖြတ်ယူနေတယ် ဆရာမကြီး
ကလည်း သိလျှက်နဲ့ မပြောဘူး ကြည့်လုပ်ကြပါဦး